हाइड्रोलिक कटनिंग मिसिन, बीम बीम कतरनी मिसिन - Bambeocnc
स्विंग बीम कलरिंग मिसिन एक फोर्जिंग मशीनरी हो। मुख्य भूमिका धातु प्रसंस्करण उद्योग हो। आवश्यक विशेष मशीनरी र उपकरण को पूरा सेट प्रदान गर्न को लागी मिसिन को विमानन, हल्का उद्योग, धातु विज्ञान, रासायनिक, निर्माण, जहाज निर्माण, ओटोमोबाइल, बिजुली, बिजुली को उपकरण, सजावट र अन्य उद्योगहरुमा व्यापक रूप देखि प्रयोग गरिन्छ।
हाइड्रोलिक क्यान्सर प्रविधि विभिन्न धातु सामग्री, जस्तै लोहे, हल्का इस्पात, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम गली, जस्ती प्लेट ...... काट्न प्रयोग गरिन्छ ...... विभिन्न तन्य शक्तिसँग विभिन्न सामग्री र क्षमता र मोडेल मेमोरीको विभिन्न प्रकार छान्नु पर्छ।
यो धेरै व्यापक रूपमा विमानन, हल्का उद्योग, धातु विज्ञान, रासायनिक ईन्जिनियरिङ्, निर्माण व्यापार, जहाज, स्वत: बिजुली र ईन्जिनियरिङ्, सजावट, ढोका र विन्डोज बनाउने र धेरै मा प्रयोग गरिन्छ।
विभिन्न सामग्री, मोटाई र लम्बाइमा निर्भर गर्दछ, कलरिंग मिसिन विभिन्न आकार, क्षमता र डिजाइनमा गर्न सकिन्छ।
यो सामग्रीले रामको साथमा पहिलो क्लैंपिंग गरेर काम गर्छ।
एक चल ब्लेड तब एक निश्चित ब्लेड मा ढिलो गर्न को लागी सामाग्री को कचर्ड। ठूला पानाहरूको लागि चलिरहेको ब्लेड एक कोण वा "चट्टान" मा सेट गर्न सकिन्छ क्रमशः एक पक्षबाट अर्कोतिर अर्को सामग्री को लागी; यस कोणलाई क्यानर कोणको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। कोणमा ब्लेड सेट आवश्यक बल को मात्रा घटाउँछ, तर स्ट्रोक बढ्छ।
बीम हाइड्रोलिक क्यान्सर स्विंग को मुख्य विशेषता
1. इस्पात-वेल्डेड ढाँचा, हाइड्रोलिक ड्राइव, चाकू बीमको फिर्ती सजिलै संगै संकलक वा नाइट्रोजन सिलेंडर द्वारा तुरुन्त हुन्छ र विश्वसनीय प्रदर्शन र सुन्दरता संग।
2. चाकू निकासीले तत्काल समायोजन उपकरण छ, त्यसको समायोजन सजिलो र छिटो छ।
3. चाइनी शेल्फले कम-कम समायोजनलाई अप्ठ्यारो पार्छ, मेकेनिकल ब्याक गेज डिभाइसको साथमा माइक्रो समायोजनको अनुमति दिन्छ, ब्याक गेजको आयाम र कंकरको समय डिजिटल प्रदर्शन छ।
4. बिजुलीको बक्समा ब्रेक ब्रेक सुरक्षा उपकरण छ, रखरखाव को समयमा सुरक्षा को ग्यारेन्टी गर्न।
मेशिन मोडेल कसरी छनौट गर्ने?
मुख्य आवश्यक जानकारी सामाग्री, काटन मोटोपन र काटन लम्बाइ हो।
यो श्रृंखला कतरनी मुख्य रूपले धातु प्लेट्स को मोटाई 0.2-30mm र विभिन्न कतरनी लम्बाई संग प्रयोग गर्दछ। अधिकतम कटन मोटाई केवल 450 मेगावाट को तन्य शक्ति संग कार्बन संरचनात्मक इस्पात प्लेटहरु लाई लागू हुन्छ; यदि यो धातु प्लेट्स कटौती गर्न को लागी अपेक्षाकृत उच्च तन्य शक्ति जस्तै म्यांगनीजियम इस्पात, स्टेनलेस स्टील, आदि संग, अधिकतम कतरनी मोटाई कम हुनेछ। यस प्रकार, जब कतरको प्रयोग गर्दा प्ले प्लेटहरूको मोटाईले प्लेटफर्मको तन्य बलको मूल्य अनुसार आफूलाई अपरेटरहरूको कडा नियन्त्रणमा राखिनेछ। यस श्रृंखला को काटन कोण तय भएको छ, यो ठूलो मोटाई अंतर को अनुसार समायोजित नहीं गर्न सकिन्छ, सामान्यतः यो व्यापक रूप देखि 0.2-16mm को मोटाई संग प्रयोग गरिन्छ। माथि 16mm मोटाई तपाईंले Q11Y श्रृंखला चयन गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यसपछि, विभिन्न सामग्रीको मोटाई अनुसार, तपाईं आफैंको लागि उपयुक्त लम्बाइ चयन गर्न सक्नुहुनेछ। यी सबैसँग तपाईं सही मोडेल र विवरणहरू पत्ता लगाउनको लागि प्राविधिक मापदण्ड तालिकामा जान सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंलाई हामिलाई थप सहयोग चाहिन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस हाम्रो सम्पर्क जानकारी मार्फत।
धातु काम गर्ने उपकरण इस्पात शीट सीएनसी हाइड्रोलिक कतरनी machi ...
उच्च सटीकता तंत्र विश्लेषण हाइड्रोलिक स्विंग कलरिंग मा ...